सवारी निषेधपछि कस्तो छ ठमेलको अवस्था ? – Medianp
सवारी निषेधपछि कस्तो छ ठमेलको अवस्था ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, पुष २५, २०७४१६:४४
काठमाडौं, २५ पुस । काठमाडौंको ठमेल पर्यटकीय स्थल हो । यहाँ हजारौं आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुको जमघट हुने गर्छ । बाह्य पर्यटकहरुको रोजाइको स्थान पनि हो – ठमेल । ठमेलमा पर्यटक लक्षित सामानको व्यापार हुने गर्छ । व्यवसायिक दृष्टिकोणले पनि ठमेल उत्कृष्ट मानिन्छ ।
केही महिना अघिसम्म आफैं अस्तव्यस्त रहेको ठमेल अहिले भने सुधारिँदै गएको छ । गएको कात्तिक ५ गतेदेखि ठमेल सवारी मुक्त क्षेत्र भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको पहलमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गएको कात्तिक ५ गतेदेखि ठमेललाई सवारी निषेधित क्षेत्र लागु गरेको हो । यस कारण ठमेल घुम्न आउने पर्यटकलाई मात्रै होइन स्थानीय तथा व्यापारीहरुलाई पनि सहज भएको छ । सवारी मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएसँगै व्यापार गर्न सहज भएको व्यापारीहरु बताउँछन् ।
मान्छे र सवारी साधनको चापअनुसारको सडक फराकिलो नहुँदा र भएका सडक पनि साघुँरो भइदिँदा जनजीवनलाई असर पारिरहेको थियो । तर, सवारी साधन निषेधित क्षेत्र बनाएपछि भने ठमेलमा पैदल यात्री र व्यापारीलाई सहज भएको छ । कपडाको व्यापार गर्दै आएका रामकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिले मान्छे र गाडीको आवाजले कहाली लाग्दो ठमेल अहिले शान्त छ । धुलो धुवाँका कारण सामान बिग्रने गर्थाे, तर अहिले सामान बिग्रने समस्यमा कमि आएको छ ।’
गाडीको घाइँघुइँ र भीडभाडले हिँड्न समेत असहज ठमेलमा सवारी निषेध गरिएपछि हिँडडुल गर्न निकै सहज भएको छ । पैदलयात्री कृष्ण कुमारी शाक्य भन्छन्, ‘पहिले मान्छे र मोटर गाडीले गर्दा यो बाटो हिड्न मन लाग्दैनथ्यो, तर अहिले रमाइलो लाग्छ ।’
सवारी निषेध गरिएपछि व्यापारीहरुलाई केही अप्ठारो भने परेको छ । पसलका आवश्यक सामान ढुवानी गर्न कठिनाइ परेको बताउँछन् व्यापारी रामकाजी श्रेष्ठ । तर, उनलाई ठमेलको सुन्दरता बढ्दै गएकोमा सवारी निषेधप्रति कुनै गुनासो छैन । ठमेलको सुन्दरता बढाउन र व्यापारीलगायतलाई सहजता उपलब्ध गराउन उनको केही सुझाव छ ।
‘ठमेलमा भइरहेका सडक मर्मत कार्य चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र अव्यवस्थित रुपमा रहेको विद्युतको तारहरुलाई सहि रुपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने ठमेल बजार अझ आकर्षित हुन्थ्यो’, श्रेष्ठको सुझाव थियो ।
उपयुक्त होटेल, क्लब र विभिन्न मनोरञ्जन प्रदान गर्ने ठमेलप्रति पर्यटकहरुको विशेष आकर्षण हुनेगर्छ । पर्यटकको माध्यमबाट मुलुकले राम्रो आर्थिक लाभ गर्न सक्ने भएकाले यहाँको समस्याप्रति सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालको भनाइ छ ।